'पुक्क मुक्का हान्न पाउने अध्यादेश ल्याइयोस् सरकार !'
16th February 2021, 01:48 pm | ४ फागुन २०७७
देश 'धक्का मुक्का'मय छ। कोरोनापछि 'मुक्का'को प्रतियोगिता नभएको भए के पो हुन्थ्यो? प्रतियोगिता नभए पनि मुक्काको बजार भ्यालु बढेको बढ्यै! यसको भ्यालु त नेप्सेभन्दा माथि पुगिसक्यो।
कुरा राजनीतिबाट थालौं। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशलाई धक्का दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मुक्का दिने दाउमा छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूह। दुई गुटका नेता अहिले नाटक र नौटङ्कीमा व्यस्त। 'बा' हरु नै भिड्न थालेपछि केटाकेटी नभिडी त सुखै भएन। वाकयुद्धले मात्र पुगेन। धक्काले नपुगे पछि उनीहरु अब मुक्का हान्न 'कोर्ट'मै आइसके।
पहिलाका साथी। अहिलेका प्रतिस्पर्धी। पछि के हुन्छ थाहा छैन। अहिलेलाई चाहिँ भिड्नै पर्‍यो। भिडिसकेपछि मुक्का त हान्नै पर्‍यो। कसको मुक्का खत्रा भन्ने त देखाउनै पर्‍यो। कम कठिन छ र?
मंगलवार यस्तै धक्कामुक्कीको दृश्य देखियो आफू पढेको प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा।
पहिला आन्द्राभुँडी जोडिएका विद्यार्थी नेताहरुबिच अहिले 'ब्रेकअप' भएको छ। कोही ओलीतिर लागे कोही प्रचण्ड नेपालतिर। वामदेव भएर त बस्न पनि त भएन!
त्यसैले प्रेमको सप्ताह नसकिँदै यी दुई गुट नजिकिनु भन्दा टाढिए। र, त दुईधारका विद्यार्थीबिच धक्कामुक्का चल्यो। कसैको दाँत भाँचियो रे। कसैको नाक फुट्यो। यो त ट्रेलर मात्रै हो। पूरा फिल्म देखाउन सडकमा होडबाजी नै छ। आउने दिनमा सडकमा यही दृश्य नदेखिएला भन्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसैले नेकपा विभाजनसँगै मुक्का सिक्न अनिवार्य जस्तो देखिन थालेको छ।
अब जे कुरामा पनि नेगेटिभ देखिस भन्छन् पत्रकारलाई। त्यसैले सकारात्मक सोच बनाउनै पर्‍यो। अदालतदेखि क्याम्पससम्म मुक्कामुक्की चल्ने भएपछि के होला सकारात्मक? हैट छ त। पख्नुस् त्यसबारे विस्तारमा बताउने नै छु।
मुक्काको आवश्यकता खड्किएपछि मार्सलआर्ट त सिक्न पर्‍यो नै। यति भइसक्दा मुक्का नसिकेर हुन्छ त? अलि अस्तिमात्र प्रधानमन्त्री ओली नै 'धक्कामुक्का'को सिकार भएको बजारमा बुझियो। उनी भन्दै थिए : बैगुनी केटोले पुक्क हानेर भाग्यो।
पुक्क हान्ने कुरा राजनीतिमा मात्रै अल्झिएको चाहिँ छैन। अलि दिन अघिको मात्रै कुरा हो, अदालतमै एकजना इजलास अधिकृतले नायब सुब्बाको मुक्कापुक्का भेटे। बिचरा श्रीमान् नै अलमलमा। हुन त धेरैजसो अलमल अदालत नै त पुग्ने हो।
जिल्ला तहमा त नेकपा गुटकै कार्यकर्ता कुटाकुट पछि एक जनाको मृत्यु पनि भयो। सत्तारुढ नेकपाकै प्रतिपक्षी अध्यक्ष तर्फका कार्यकर्ताको ज्यान गयो। अब यस्ता घटना हुन नदिन मार्सल आर्ट त सिकाउन अनिवार्य भयो।
आवश्यकता त सबैतिर देखियो। स्कुलमा देखियो। कर्मचारीमा देखियो। संसदमा देखियो। नागरिक समाजलाई देखियो। आलोचना गर्नेहरुलाई देखियो। अरु त अरु अदालतमै मै देखियो। मुक्का अध्यादेश यसरी ल्याउन पर्‍यो कि पुक्क हानेर कोही भाग्न नसकोस्, कमसेकम एक चाहिँ फर्कावस्।
अलि अस्ति त राष्ट्रप्रमुखलाई धक्का दिन लागेकी एक जना नेतृलाई 'मुक्का' लाग्यो। कठैबरा, प्रहरी नै लिन आइपुग्न पर्‍यो। प्रहरीको पनि बाध्यता उस्तै।
हुँदाहुँदा राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका महावीर पुनलाई पनि झोक चलेछ। राजनीति पो बुझे कुन्नी, २५ वर्षे ठिटोसँग आविस्कार केन्द्रमै कुस्तीको तयारी पो थालेछन्।
भिड्नेहरु भिडिरहन्छन्, स्कोरबोर्डमा 'साइवार सेना' छँदैछन्। खेलाडीले पनि सोच्न नभ्याएको 'टेक्निकल एनालिसिस्' त्यताबाट आइहाल्छ। मिडियातिर सम्पादक र संवाददाताको पनि 'धक्का मुक्का' चलेको चर्चा चलेकै हो।
राजनीतिको कुरा कति गर्नु, कोरोनाले थलिएको खेलकुद क्षेत्र उठ्न सकेको छैन। खेलकुद राजनीति भएको भए त उठ्थ्यो पनि होला। तर अब 'मुक्का अध्यादेश' ल्याएदेखि खेलकुदको पनि विकासै हुन्थ्यो। कमसेकम कार्यकारी प्रमुखलाई पुक्क हान्दा मुक्का फर्काउन सक्ने वातावरण त बनाउन पर्‍यो। त्यसैले एउटा मुक्का सिकाउने मुक्का विश्वविद्यालय नै चाहियो। आफ्नालाई दरबन्दी दिने ठाम पनि मिल्ने भयो त्यसले।
त्यसका लागि नेपालमा मुक्का अध्यादेश त चाहियो चाहियो।
नत्र कलेज कसरी जाने? लोकसेवामा पास गरेर कसरी ज्यान जोगाउने? राजनीति कसरी गर्ने?
सरकारले अब कलेज जानुअघि ब्ल्याक बेल्ट अनिवार्य गरोस्। लोकसेवाको परीक्षामा तह अनुसार मार्सल आर्टको योग्यता खोजियोस्। राजनीति गर्नलाई 'पुक्क हान्न' जान्नुपर्ने नियम बनाइयोस्। अदालत जान मार्सल आर्टमा कम्तीमा एउटा प्रतिस्पर्धा जितेको हुनुपर्ने नियम बनाइयोस्। यी सबै कुरा समेटेर 'मुक्का' अध्यादेश त चाहियो 'केपी बा'।